Blog Reader: [စပ်မိစပ်ရာ]3New Entries: ချစ်သူဘာဝ
ကောင်လေး ။ ။ ဟလို
ကောင်မလေး။ ။ တီဗီ ဖွင့်ကြည့် မြန်မြန်
ကောင်းလေး ။ ။ ဟုတ်..
ကောင်မလေး ။ ။ မြန်မြန်… ဖွင့်ပြီးပြီလား
ကောင်လေး ။ ။ အင်း…
ကောင်မလေး ။ ။ အဲဒီ မော်ဒယ်ဂဲလ် ဘယ်သူလဲ သိလား
ကောင်လေး ။ ။ သြော်… xxxx လေ။ xxxx ကားမှာလဲ ပါတယ်လေ…
ကောင်မလေး။ ။ သူ လှလား..
ကောင်လေး ။ ။ အင်း… လှပါတယ်
ကောင်မလေး ။ ။ သူ့ကို ကြိုက်လား
ကောင်လေး ။ ။ (ဒွတ်ခ.. စပြီ) အင်း.. ဒီလိုပါပဲ (အတွင်းစိတ်။ သိပ်ကြိုက် အရမ်းခိုက်)
ကောင်မလေး ။ ။ လှတယ်ဆို ကြိုက်ရမှာပေါ့ လာမလိမ်နဲ့
ကောင်လေး ။ ။ အာာ.. မလိမ်ပါဘူး
ကောင်မလေး ။ ။ ဒါဖြင့် ကြိုက်တယ်ပေါ့
ကောင်လေး ။ ။ ဒွတ်ခ ကြိုက်တယ်လဲမဟုတ် မကြိုက်ဘူးလဲမဟုတ် ပုံမှန်ပါပဲ (ကြိုက်ယုံမကဘူးဟေ့ အသေရရ အရှင်ရရလောက်ပဲ )
ကောင်မလေး ။ ။ အင်း အင်း.. ဒါဆိုလဲ ပီးရော… ဂလောက်(ဖုန်းချသံ)
ကောင်လေး ။ ။ ဟူးး.. ဘာတွေလဲကွာ….
ကောင်မလေး။ ။ ညနေကျ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားမယ် သိလား
ကောင်လေး။ ။ သြော်.. သွားလေ အကြာကြီးတော့မသွားနဲ့နော်
ကောင်မလေး။ ။ အင်း.. သိပ်မကြာပါဘူး
ည ၁၀ နာရီခန့်အချိန်… ကောင်မလေးမှ ဖုန်းဆက်လာ…
ကောင်မလေး။ ။ ညနေက လိုက်လဲမလာဘူး သိပ်စိတ်ချတယ်ပေါ့…
ကောင်လေး။ ။ အာာ.. မဟုတ်ပါဘူး ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွားမှာ သိနေတာပဲ အဝေးကြီးမှ မဟုတ်တာ
ကောင်မလေး။ ။ အင်းပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မပူဘူးမလား သိပါတယ်
ကောင်လေး။ ။ အာ… အဲလိုမဟုတ်….
ဟူးး…. နေတာက ကျောက်တံတား သွားတာက ဗိုလ်ချုပ်ဈေး နီးနီးလေးကိုဗျာ…
ဒီနေ့ ကောင်လေး သူငယ်ချင်းများနှင့် စာ အတူလုပ်ရန် ချိန်းထားပါသည်။ ကောင်မလေး ထံမှ ခွင့်ပြုချက် ယူထားပြီးလဲ ဖြစ်သည်။ စာလုပ်နေချိန်တွင် ကောင်မလေး ထံမှ ဖုန်းဝင်လာသည်။
ကောင်မလေး။ ။ တော်ကြာ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်ဟာ
ကောင်လေး။ ။ အန်.. စာလုပ်နေတယ်လေ ပြောထားတာပဲဟာ
ကောင်မလေး။ ။ သိပါတယ်၊ ဒါမယ့် အဲဒီကားအရမ်းကြည့်ချင်လို့ နောက်တစ်ပါတ်ကျ မရှိတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်
ကောင်လေး။ ။ အာာ… မရဘူးဟ စာမေးပွဲလဲနီးပြီ ထွက်လာရင် သူငယ်ချင်းတွေ ဆဲကြမှာ
ကောင်မလေး။ ။ တကယ်ရော စာလုပ်နေတာ ဟုတ်ရဲ့လား (မှားပါတယ်) သူတို့နဲ့ပေးပြော (လေသံမာတယ်ဟ)
ကောင်လေး။ ။ ဟုတ်.. ဟုတ်
ကောင်လေး သူငယ်ချင်း။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ဟ ငါတို့ စာလုပ်နေတာ
ကောင်မလေး။ ။ ……………. (အသံတိတ်)
ကောင်လေး။ ။ ယုံပြီလား စာလုပ်နေပါတယ်ဆို
ကောင်မလေး။ ။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် မသွားဘူး ဆိုပါတော့ (ဒွတ်ခ စိတ်ကြီးပဲ)
ကောင်လေး။ ။ ကဲပါ ဒီလိုလုပ် ညနေပွဲ သွားမယ်နော် အိုကေလား
ကောင်မလေး။ ။ ဟင့်အင်း သွားဘူး ညနေလူများတယ်
ကောင်လေး။ ။ …………….. (ညနေလူများမယ်တဲ့ ကြိုသိနေတော့တာပဲ နတ်မျက်စိများရနေလားမသိ)
ကောင်မလေး။ ။ ချစ်သူအတွက်ဆို ဒါလေးတောင် မလုပ်ပေးဘူး (ဘုရားရေ)
ကောင်လေး သူငယ်ချင်း။ ။ ကဲပါ သွားလိုက်ပါကွာ ညကျမှ ဘာတွေ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဖုန်းဆက်ပေးလိုက်မယ် (ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်း )
ကောင်လေး။ ။ အိုကေ အိုကေ ဒါဆိုလဲ သွားမယ်လေ လာကြိုရမလား
ကောင်မလေး။ ။ တော်ပါ အပိုတွေလုပ်မနေနဲ့ မကြည့်ချင်လဲ နေတော့ လာမဖားနဲ့ ပုံမှန်ဆက်ဆံ
ကောင်လေး။ ။ (ဟူး..ငါပဲမှားတာပါ) မဟုတ်ရပါဘူးကွာ တကယ်ကြည့်ချင်တာပါ လာခေါ်လိုက်မယ်နော်
ကောင်မလေး။ ။ အင်း.. ဒါဆိုလဲ ပြီးရော လာမခေါ်နဲ့တော့ xxxxx မှာစောင့်နေ ထွက်လာခဲ့မယ်
ကောင်လေး။ ။ အမိန့်တော်မြတ် အတိုင်းပါ
ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီလို့ ထင်နေပါသလား ဆက်ရန် ကျန်ပါသေးတယ်။ ကောင်းလေး ချိန်းထားတဲ့နေရာမှာ စောင့်နေပြီး ရုပ်ရှင်ပြဖို့ အချိန် တဖြေးဖြေး နီးလာပါပြီ။ ကောင်မလေးကတော့ ပေါ်မလာသေးပါ။
ကောင်လေး။ ။ ဟလို… ဘယ်နားရောက်ပြီလဲ
ကောင်မလေး။ ။ အင်း.. အိမ်မှာပဲ ရှိသေးတယ်
ကောင်လေး။ ။ (လုပ်ပီကွာ..) ဘာဖြစ်လို့လဲ အိမ်က ထွက်လို့မရလို့လား
ကောင်မလေး။ ။ မဟုတ်ပါဘူး ခုနက ဖုန်းချပြီးတော့လေ ဗိုက်ထဲအောင့်လာလို့ အဲဒါ ပိုဆိုးလာမှာ စိုးလို့
ကောင်လေး။ ။ ဟုတ်လား ဒါဆိုလဲ ဖုန်းဆက်လိုက်ရောပါ့ကွာ (ဟူးးး.. စိတ်ညစ်တယ် သက်သက်လုပ်တာ)
ကောင်မလေး။ ။ အင်း.. သက်သာမလားလို့ စောင့်ကြည့်နေတာ ဟီးဟီးး
ကောင်လေး။ ။ ဒါဆို မကြည့်တော့ဘူးပေါ့
ကောင်မလေး။ ။ အင်း… ဗိုက်အောင့်နေလို့ စိတ်ဆိုးနဲ့နော် kiss kiss
ကောင်းလေး။ ။ (လုပ်ထားဟေ့…) ဟုတ်ဟုတ် မဆိုးပါဘူး။ ခဏလောက် အိပ်လိုက်ပါလား သက်သာသွားအောင်လေ တာ့တာနော်
အထက်ပါဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပွားပြီးနောက် တစ်ပါတ်အကြာ ကောင်းလေး သူငယ်ချင်းများနှင့် စာစုလုပ်နေချိန်တွင်…
ကောင်မလေး။ ။ ဟလို ဘယ်ရောက်နေလဲ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်ကွာ @#$%&(^%$@#$……………….
ကောင်လေး။ ။ ……………………………………………
မိုးဟေကို လိင် အင်တာနက်
ဟဲဟဲ… ပို့စ် ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး ဘာလဲလို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ စပ်မိစပ်ရာ ဘလော့ဂ်က keywords တွေပါ။ ဒီနေ့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ဘလော့ဂ် လာလည်သူ စာရင်းကို ကြည့်မိတယ်။ January လ စာရင်းမှာ အများဆုံးနေ့က ၁၆၁ အနည်းဆုံးက ၃၂ ပျှမ်းမျှဆိုရင် တစ်ရက်ကို ၅၀ ပါတ်ချာလည် ဆိုတော့ လာလည်သူ အနည်းငယ်ကျသွားတယ် ပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ Top Traffic Sources ကို ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ Direct ၀င်ကြည့်သူက နံပါတ်တစ်ဖြစ်ပြီး Referring Sites တွေကတော့ ၁။ မောင်မျိုး ၂။ တောကျောာင်းဆရာ ၃။ လေးမ တို့ဖြစ်ကြတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက ဂူဂယ်မှာ ရှာပြီး စပ်မိကို ရောက်လာကြသူတွေပါ။ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ပေးထားသလိုပဲ မိုးဟေကို ၊ လိင် ၊ အင်တာနက် ၊ ကဗျာများ ၊ စပ်မိစပ်ရာ ၊ ဆိုတဲ့ စကားလုံး keywords တွေကိုရှာရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ်ကို ရောက်လာကြတယ်ခင်ဗျ။ Search Engine က တဆင့် ရောက်လာကြသူတွေက ၂၆.၀၈% နဲ့ ဒုတိယ နေရာမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ အဲဒီ ကီးဝေါ့တွေကို အတော်လူကြိုက်များပါလား လို့ သဘောပေါက်မိတယ် ။ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ဖူးတဲ့ လိင် မီဒီယာများ နဲ့ အင်တာနက် ဆိုတဲ့ ပို့စ်က ဒေတာ တွေ မမှားဘူး ဆိုတာ သက်သေပြနေတာပေါ့နော့် ။ ဘလောဂ်ရေးတာ လာလည်သူနည်းနေတာနဲ့ လိုင်းပြောင်းလိုက်ရင်တောင် ကောင်းလေမလားပဲ :D
မောင်ခွန်းချို နှင့် တီဗီဂိမ်းဆိုင်
မောင်ခွန်းချို နှင့် သူငယ်ချင်း တသိုက်သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ဘဝ၏ တဆစ်ချိုးဟု ထိုထိုလူတို့ ခေါ်ဆို သမုတ်အပ်သော ဒဿမတန်း စာမေးပွဲအား အောင်မြင်ပြီးမြောက် ကြလေသည်။ အောင်မြင်ပြီးနောက် ရှေးရှေး အထက်ကျော်ကာရီမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အစဉ်အလာအတိုင်း တက္ကသီလာ မြကျွန်းသာသို့ သွားလို ၏။ သို့သော် မသွားနိုင်။ သူတို့ အလှည့်ကျရန် နှစ်နှစ်နီးပါး စောင့်ဆိုင်းရပါမည်။ ဤနှစ်နှစ်နီးပါး အချိန်ကာလ အား မည်သို့ ကျော်ဖြတ်ရပါမည်နည်း။ သူငယ်ချင်းတသိုက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တို့တွင် တွင်တွင်ထိုင်၍ ခေါင်းချင်းရိုက်ကြ၏။ မည်သည့်အဖြေမှ မထွက်။ လက်ဖက်ရည်ဖိုး ဆေးလိပ်ဖိုး တို့သာ အတော်ကုန်သော ဟူ၏။ ထိုမျှဖြင့် မကျေနပ်နိုင်။ ယမကာဆိုင် ထိုင်သောအခါ တွင်လည်း ဆွေးနွေး ကြပြန်၏။ ပီဘိ အရက်သမားကြီး တွေအလား အရက်ခွက်အား ဆကာဆကာ တိုင်ပင်ကြပြန်၏။ နောက်ဆုံးတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုအား စုပေါင်းလုပ်ကိုင် ကြရန် အဖြေထွက်လာ၏။ သို့သော် နေပါဦး။ မည်သည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြမည်နည်း။ တယောက်က ဟန်ကျမည်ထင်သည်ကို တယောက်က ဟန်မရ ဟု မြင်၏။ တယောက်က တင်ပြသော အလုပ်အား တယောက်က ကန့်ကွက်၏။ တော်တော်နှင့် အဖြေမထွက်။ ဂွကျလျက်သာ နေ၏။ နောက်ဆုံးတွင်မှ အများသဘောနှင့် ကိုက်ညီသော အဖြေတစ်ခု ထွက်လာ၏။ တီဗီဂိမ်းဆိုင် ဖွင့်ရန်တည်း။
ဤနေရာတွင် မောင်ခွန်းချို နှင့်တကွ သူငယ်ချင်းတသိုက်အား အနည်းငယ် မိတ်ဆက်လို၏။ မောင်ခွန်းချိုကား စာပေသမားတည်း။ အထွေထွေ အထူးထူးသော ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ် မှအစပြု၍ မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်များအဆုံး မပြတ်တမ်း ဖတ်ရှုလေ့လာ၏။ မျက်မှန်ထူထူ၊ ဆံပင်ရှည်ရှည်ပွပွ၊ ပိန်ကိုင်းကိုင်း နှင့် ကဗျာဆရာဂိုက် ဖမ်းနေသူ ဖြစ်၏။ အကြောင်းအရာ အတော်များများကို စပ်စပ်စပ်စပ် သိ၏။ သို့သော် မည်သည့် အရာကိုမျှ ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိ။ မည်သည့်အလုပ်ကို မှလည်း လုပ်ရန် စိတ်မဝင်စား။ အကြောင်းပြချက် ကား စာပေဖတ်ရှုလေ့လာ နေရသဖြင့် အချိန်မရှိ ဟူသတတ်။ အာဂ မောင်ခွန်းချိုတည်း။
မောင်သင်္ကြန် ကား သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း ကို ခုံမင်သောသူ တယောက်ဖြစ်၏။ ဟေးလားဝါးလား နေရသည်ကို ပျော်၏။ မိဘလက်ငုပ်လက်ရင်း ကုန်သွယ်စီးပွား ကိုလည်း စိတ်မဝင်စား။ မည်သည့်အရာ ကို စိတ်ဝင်စားမှန်းလဲမသိ။ ပုဂံမင်းအကြောင်း ကျမ်းဂန်တွင် ပါသည့်အတိုင်းဆိုရသော် လွေ့လွေ့ရမ်းရမ်း ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ တတ်၏။ ဤမျှဖြင့်ပင် မောင်သင်္ကြန်အကြောင်း တော်လောက်ပြီ။
မောင်ကျော်စိုး နှင့် မောင်ကောင်းဟန် တို့ကား အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် နှစ်ဦး နှင့် နှိုင်းစာသော် ထကြွ ဝိရိယ ရှိသူများဖြစ်၏။ မောင်ကျော်စိုးကား အလုပ်တစ်ခုကို စနစ်တကျ သေချာကျနစွာ လုပ်လို၏။ မောင်ကောင်းဟန် ကား လူ့ဘဝကို စာရင်းဇယား ဆွဲသကဲ့သို့ နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြား နှင့် သတ်မှတ် ထားသူဖြစ်၏။ သူ့မူသူ့ဟန် နှင့် နေတတ်၏။ ဤမျှဖြင့်ပင် သူတို့ နှစ်ယောက်အကြောင်း ရပ်ဦးမည်။
နောက်ဆုံးတယောက် ဖြစ်သော မောင်ပြည့်ဖြိုးကား တမူထူး၏။ တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်သောဥာဉ် ရှိ၏။ စိတ်နောက်သို့ ကိုယ်ပါလွန်း၏။ အိမ်မှ မကြာမကြာဆင်း၏။ အပေါင်းအသင်း မင်၏။ ကွန်ပြူတာအား ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းသူလဲ ဖြစ်၏။ ဤမျှဖြင့်ပင် မောင်ပြည့်ဖြိုး အကြောင်း တန်ဦးမည်။
ထိုထိုဤဤ ကြန်အင်လက္ခဏာ တို့နှင့် ပြည့်စုံသော သူငယ်ချင်းတသိုက်သည် တီဗီဂိမ်းဆိုင် ဖွင့်ရန် အပြီးသတ် သဘောတူညီ ကြလေသည်။ တကယ် လုပ်ငန်းစမည် ပြုသောအခါ မောင်ခွန်းချို မပါဝင်ဖြစ်။ လိုအပ်သည်များကို ကူညီမည် ဟုဆိုကာ ကျန်ရစ်၏။ မောင်သင်္ကြန်၊မောင်ကျော်စိုး နှင့် မောင်ကောင်းဟန် တို့သုံးဦးသာ ငွေရင်းစိုက်ထုတ်၍ ဆိုင်ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်ကြ၏။ မောင်ပြည့်ဖြိုး ကား ဆိုင်မန်နေဂျာ လုပ်ချိမ့်မည်။ မောင်ခွန်းချိုက ဝိုင်းပေးဝန်းပေးမည်။ ကောင်းလေစွ၊ ကောင်းလေစွ။ ဆိုင်ခန်း ရှာပုံတော် ဖွင့်ကြ၏။ ၂၂လမ်း အလယ်လမ်းတွင် ပထမထပ် အခန်းတခန်း အား ငှားရမ်း ရရှိသည်။ ဟန်ကျပြီ။ ဆိုင်အမည် မပေးရသေး။ ဤတွင် မောင်ခွန်းချိုက ဆိုင်အမည်ကို "Sunday" ဟု ပေး၍ တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ရန် အကြံပေး၏။ ခေါ်ရလွယ်ကူသည် ဟု အကြောင်းပြ၏။ အမှန်က ဘာမှမဟုတ်။ ထိုစဉ်က ခေတ်စားနေသော "Micheal learns to rock" ၏ သီချင်း "Someday" နှင့် ခပ်ဆင်ဆင် "Sunday" ဟု ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ထိုသို့ ဆိုင်အမည်အား လှပသေသပ်စွာ ကင်ပွန်းတပ်ပြီး သကာလ ဆိုင်တွင် စံပယ်ရန် ဘုရားရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူအား ကန်တော်ကလေး ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှ ပင့်လှူပူဇော် ပြန်လေသည်။ ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ဖြစ်ပြီ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မိုးဥတု၏ တခုသော တနင်္ဂနွေနေ့၌ ဆိုင်ကို စတင် ဖွင့်လှစ်ကြလေ သတည်း။
ထိုနေ့ကား မင်္ဂလာ အပေါင်း ခညောင်းသောနေ့ ဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ နှယ်နှယ်မဟုတ်။ "Sunday" ဟု ခေါ်တွင် သမုတ်အပ်သော တီဗီဂိမ်းဆိုင် ဖွင့်သောနေ့ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ တချိန်တွင် Sunday ဟူသော အမည်နာမ နှင့်ပင် နိုင်ငံတကာတွင် ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာ ချိမ့်မည်။ မဖြစ်ဟု မည်သူ ပြောနိုင်အံ့နည်း။ ထိုသို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြ ပြီးသကာလ ဆိုင်ကို စတင် ဖွင့်လှစ်ကြ၏။ တီဗီဂိမ်းစက် ရှစ်လုံး ကား လာရောက်ဆော့ကစားမည့် ကလေးသူငယ် လူကြီးလူငယ် အပေါင်းတို့အား ငံ့လင့်၏။ ကြာကြာ မငံ့လင့်ရပါ။ ဖွင့်ပြီး တစ်နာရီ အတွင်း စက်ငါးလုံးခန့် လူပြည့်သွား၏။ ဟန်ကျချေပြီ။ သို့ရာတွင် နေပါဦး။ ဆော့နေသူများကို သေချာကြည့်ပါဦး။ ဆိုင်ဝင်ပေါက် နှင့် အနီးဆုံး ဖြစ်သော စက်တွင် တင်ပျဉ်ခွေလျက် အကျအန ထိုင်ဆော့ နေသူကား မောင်ခွန်းချိုတည်း။ ကိုယ်ကာယ ကြုံလှီသဖြင့် အပြင်အပတွင် ဘောလုံးမကန် ရသည်ကို အတိုးချသလော မပြောတတ်။ သည်းကြီးမည်းကြီး တီဗီဂိမ်း ဖြင့် ဘောလုံးကန်နေ၏။ မောင်အေးလွင် ကား သိုင်းဝတ္ထုများကို အရည်ကြိုသောက်ထား သူဖြစ်၏။ သို့ကြောင့်လော မပြောတတ်။ တီဗီဂိမ်း ဖြင့် သည်းကြီးမည်းကြီး ဓားသိုင်းကစား နေ၏။ နောက်စက်များတွင်လည်း မောင်ခွန်းချိုတို့ သူငယ်ချင်း တသိုက်၏ သူငယ်ချင်းများ ဂိမ်းခွေအမျိုးမျိုး တို့ကို အားပါးတရ ကစားနေကြ၏။ တကယ် ပိုက်ဆံပေး၍ ဆော့မည့် ကလေးများ လာသောအခါမှ မထချင်ထချင် နှင့် ထပေးကြသော ဟူ၏။ ခေါင်းမာသူ တချို့ကား မသိဟန်ဆောင်နေ၏။ ဆိုင်ရှင် မောင်သင်္ကြန်ကား ခပ်ပေါ့ပေါ့ ခပ်ပျော်ပျော် သမားမို့ မထောင်းတာ။ မောင်ကျော်စိုး နှင့် မောင်ကောင်းဟန် ကား ဆူလိုလှပြီ။ မဆူသာ။ လူနိုင်သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ မတတ်နိုင်။ လက်ပိုက်ကြည့်နေရ ပါသည်။
ဆိုင်ဖွင့်ပြီး တစ်လအတွင်း Sunday ကား မောင်ခွန်းချိုတို့ သူငယ်ချင်း တသိုက်၏ စတည်းချရာ ဖြစ်လာ၏။ မနက်ပိုင်းတွင်သာ လူအတန်ငယ် ရှင်း၏။ အခြားကြောင့် မဟုတ်ပါ။ စောစော မနိုးကြ သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ နေ့လယ်ပိုင်း မှစ၍ တရုန်းရုန်းနှင့် သောင်းကျန်းလိုက် ကြသည်မှာ ညဆယ်နာရီ တိုင်သောဟူ၏။ မောင်ခွန်းချိုကား ဆိုင်စဖွင့်သောနေ့ ကတည်းက အိမ်တွင်မကပ်ပြီ။ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မှန်မှန်လာ၏။ ရောက်သည်နှင့် ဂိမ်းထိုင်ဆော့သည်မှာ ညနေတိုင်တော့သည်။ ညနေ သုံးနာရီ ခန့်တွင် ဆိုင်ရှိသော တိုက်ရှေ့ လမ်းဘေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ လက်ဖက်ရည်၊ စီးကရက် တို့ကို မှာယူ ဘုန်းပေး၏။ သူ့နည်းတူ မှာယူထားသော လက်ဖက်ရည်ခွက် ကော်ဖီခွက် တို့လည်း အပုံအပင် ဖြစ်၏။ ရှင်းသူလဲ ရှင်းကြ၏။ မရှင်းသူလဲ မရှင်း။ ဆိုင်စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်သော ဟူ၏။ လွန်စွာ ချစ်ခင်ဖွယ်ရာသော သူငယ်ချင်းများတည်း။ မောင်အေးလွင်ကား မအူကုန်းတွင် နေ၏။ ဆိုင်သို့ နေ့တိုင်းလိုလို လာ၏။ ည တစ်ချက်တီး မှ ပြန်၏။ ထိုအချိန် ပြန်ရန် လိုင်းကား အဘယ်မှာ ရှိတော့အံ့နည်း။ ကိစ္စမရှိပါ။ ဆိုက်ကား နှစ်ဆင့် စီး၍ ပြန်ပါသည်။ ဆိုင်ရှင် မောင်သင်္ကြန်၊ မောင်ကောင်းဟန် တို့ပင် သူတို့လောက် မနေနိုင်။ ကျလဲကျတဲ့ လူတွေ။ ဆိုင်မန်နေဂျာ မောင်ပြည့်ဖြိုးကား မနက်စောစော ထလေ့မရှိ။ ည နှစ်နာရီ သုံးနာရီထိ ဂိမ်းဆော့ရသည် ဖြစ်ရာ အဘယ်မှာလျှင် စောစောထနိုင် အံ့နည်း။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အထိ ဂိမ်းထိုင်ဆော့ ရချေမည်လော ဟု အပြစ်တင် မစောစေလိုပါ။ မည်သည့် ဂိမ်းက မည်သို့ ကောင်းသည်ကို လာရောက်ဆော့ကစားသည့် ပရိသတ်အား ရှင်းလင်းပြောပြ စေနိုင်ခြင်း အလို့ငှာ ဆော့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ရှိ စာရင်းအင်း တို့ကို ပြုစုသည့်အခါ ပြုစုသည်။ မပြုစု သည့်အခါ မပြုစု။ ဆိုင်ရှင် မောင်သင်္ကြန်၊ မောင်ကျော်စိုး နှင့် မောင်ကောင်းဟန် ကား မောင်ပြည့်ဖြိုး အား ဆူလိုလှ၏။ မဆူနိုင်။ လူနိုင်ဖြစ်သော ကြောင့်တည်း။ ည ရှစ်နာရီ ထိုးသည်နှင့် မောင်ပြည့်ဖြိုး ဝရန်တာ သို့ရောက်၏။ ဝရန်တာတွင် တင်ပါးလွှဲ ထိုင်၏။ သူမို့ မကြောက်မရွံ့။ မည်သူတို့ကို မျှော်သနည်း။ လာရောက်ဆော့ကစားမည့် ဧည့်ပရိသတ် တို့ကိုလော။ မဟုတ်ပါ။ ဆိုင်ရှေ့တိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဗီဒီယိုဆိုင် သို့ လာရောက်ကြမည့် ကောင်မလေး များကို ဖြစ်ပါသည်။ ညဆယ်နာရီ ခန့်တွင် ဆိုင်ပိတ်၏။ ဂိမ်းစက်များကို အနားပေးရတော့မည်။ နေပါဦး၊ နေပါဦး။ သူငယ်ချင်းများ ဆက်ဆော့ကြဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဂိမ်းစက်များကား အနားမရကြရှာ။ လူဆိုလျှင် ညည်းညူကြမည် ဧကန်ဖြစ်၏။
ထိုသို့ ဆိုင်ဖွင့်နေရင်း နှင့်ပင် တရုတ် နှစ်သစ်ကူး သို့ ရောက်လာသည်။ ဆိုင်ရှင် မောင်သင်္ကြန် နှင့် မောင်ကျော်စိုးကား တရုတ်လူမျိုး များတည်း။ နှစ်ကူးတည်းဟူသော အခါသမယ ကို အကြောင်းပြုပြီး သကာလ ဖဲရိုက်ပွဲကြီး ကို ဝှဲချီး ကျင်းပ ကြပြန်သည်။ မောင်ကျော်စိုး၊ မောင်ကောင်းဟန် နှင့် မောင်ခွန်းချို ကား အထက်တန်းကျောင်းသား ဘဝကတည်းက ဖဲရိုက်ဖက်များတည်း။ ဖဲရိုက်ရင်းနှင့် လိမ္မော်ဖြူ တည်းဟူသော ပေါင်းခံရည် အား မပြတ်ဘုန်းပေးကြ၏။ ထိုသို့ ဖဲရိုက်လိုက်ကြ သည်မှာ တော်တော်နှင့် အတောမသတ်ပြီ။ နှစ်ကူးပြီး လပေါက်သည်အထိ ရိုက်ကြသတည်း။ ပြီးပြီလော။ မပြီးသေးပါ။ တရုတ်နှစ်ကူး ပြီးလျှင် မြန်မာနှစ်ကူး ရောက်လာ ပြန်ပါသည်။ မောင်ခွန်းချို နှင့် မောင်အေးလွင် ဦးဆောင်၍ ဂျစ်ကားတစ်စီး ကို ငှား၏။ ဒရိုင်ဘာ၊ စပယ်ယာ တို့နှင့်တကွ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ဆိုင်တွင်ပင် စတည်းချ ကြပါသည်။ သောက်လိုက်ကြသည့် အရက်ကား နေ့မီး ညမီး ဆက်တော့သည်။ သင်္ကြန်ပြီးသော် Sunday ကား တီဗီဂိမ်း ဆိုင်နှင့်မတူ။ သာလာယံ ဇရပ်ကဲ့သို့ ဗွက်ပေါက် ကျန်ရစ်၏။
ထိုသို့ မောင်ခွန်းချို တို့တသိုက် တရုန်းရုန်း လုပ်နေသည်ကို အိမ်ရှင် ကိုဝင်းရှိန် ကား ကြည့်မရချေပြီ။ သို့သော် တစ်နှစ်စာ ငှားရမ်းပြီး ဖြစ်နေ၏။ ကိုဝင်းရှိန် ကား လူပျိုကြီး ဖြစ်၏။ ညစ်ကတ်ကတ် နိုင်သောသူ လည်းဖြစ်၏။ ဆိုင်စဖွင့်သော နေ့ကတည်းက ဆိုင်မန်နေဂျာ မောင်ပြည့်ဖြိုး နှင့် ကတောက်ကဆ ဖြစ်သော အကြိမ် မနည်းပြီ။ ချိတ်ချိတ်ချင်း ချိတ်မိကြပြီ။ တစ်ရက်တွင် မောင်ပြည့်ဖြိုး ခရီးယာယီ ထွက်သွား၏။ ဆိုင်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ဆိုင်တံခါးအား သော့အသစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲ ခတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆိုင်အပေါ်ထပ် အခန်းတွင်ပင် နေထိုင်သော ကိုဝင်းရှိန် အား သော့တက်တောင်း၏။ ကိုဝင်းရှိန် မရှိ။ နဂိုကပင် စိတ်တိုလွယ်သော မောင်ပြည့်ဖြိုး သည်းမခံနိုင်ပြီ။ သော့ကို ချိုးဖျက်ဝင်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ မောင်ပြည့်ဖြိုး အပေါ် ကိုဝင်းရှိန် ကမ္ဘာမကြေပြီ။ ချက်ကောင်းကို စောင့်၏။ ကြာကြာ မစောင့်ရ။ တစ်ရက်သော် ဆိုင်ပိတ်ပြီးသကာလ မောင်ခွန်းချို တို့တသိုက် အရက်ဝိုင်း ဖွဲ့ကြလေသည်။ စကားပြောသံ ရယ်မောသံ တို့ကား ကိုဝင်းရှိန် ရှိရာ အပေါ်ထပ် တိုင် လျှံတက်၏။ အချက်ရပြီ။ ကိုဝင်းရှိန် ဘာမှမပြော။ ရပ်ကွက်လူကြီး များအား သွားခေါ်၏။ မောင်ခွန်းချို တို့တသိုက် ဆူပူအော်ဟစ် သောင်းကျန်းနေကြ ပါသည်ဟု အကြောင်းပြ၏။ မိမိ နှင့်တကွ သူငယ်ချင်း များအား ထိုသို့ စွပ်စွဲသည်ကို မောင်ကျော်စိုး မခံနိုင်။ အပြန်အလှန် စကားများကြ လေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် တစ်နှစ် အိမ်ငှား စာချုပ်အား ကိုးလဖြင့် အပြီးသတ်ရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြ တော့သည်။
သို့ဖြင့် မောင်သင်္ကြန်၊ မောင်ကျော်စိုး နှင့် မောင်ကောင်းဟန် တို့ အိမ်ခန်း ရှာကြပြန်၏။ သည်တကြိမ် တွင်တော့ ကန်တော်ကလေး ဘက်ရှိ လမ်းတစ်လမ်း သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြလေသည်။ ထိုလမ်းကလေး ကား ၂၂လမ်း လောက် လူ စည်စည်ကားကား မရှိ။ လူမလာ။ အနည်းငယ်လဲ ချောင်ကျသော လမ်းကလေး ဖြစ်၏။ ထိုနေရာတွင် ခြောက်လခန့် ဖွင့်ကြ၏။ အခြေအနေမဟန်။ နောက်ဆုံး ဆိုင်ကို ပိတ်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်ရလေသည်။ ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသကာလ ဆိုင်ရှိ ပစ္စည်းများအား မြတ်စွာဘုရား ဓာတ်တော်မွေတော် များကို အပြည်ပြည်ထောင် မင်းတို့ ညီမျှစွာ ခွဲယူတော် မူသကဲ့သို့ ခွဲယူကြ၏။ စီဒီ ထည့်၍ ဆော့ရသော အကောင်းဆုံး ဂိမ်းစက်ကား တစ်လုံးသာ ရှိ၏။ ထို ဂိမ်းစက် ကိုမူ ပိုက်ဆံပွတ်၍ ကံထူးရှင် ရွေးချယ်ကြလေသည်။ စက်ကား တန်ကြေး မြင့်သောကြောင့် သုံးယောက်စလုံးက လိုချင်ကြ၏။ ဘူကြီးပွတ်၏။ မောင်ကောင်းဟန်ကားမဖြစ်။ မောင်သင်္ကြန်ကား ခြောက်ပေါက်ရ၏။ မဆိုး။ သို့သော် မောင်ကျော်စိုးကား ခုနစ်ပေါက် ဖြစ်သွားသတည်း။ မောင်သင်္ကြန် မိမိကံကို အတော် စိတ်ပျက်သွားသော ဟူ၏။ စာရင်းချုပ်၍ သတ္ထုချကြည့် လေသော် တယောက်လျှင် အနည်းငယ်စီမျှ အရှုံးပေါ် ကြ၏။ မောင်ကောင်းဟန် ကား ဤလူစုဖြင့် မည်သည့် အလုပ်ကိုမျှ တွဲ၍ မလုပ်တော့ပြီ ဟူသော ကြီးစွာသော သန္နိဌာန် ကိုချ၏။ မောင်ကျော်စိုးလဲ စိတ်အတော်ပျက်သွား သောဟူ၏။ Sunday ကား တစ်နှစ် နှင့် သုံးလ သာ ခံသည်။ နိဌိတံ ရရှာလေသည်။ မောင်ခွန်းချို ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်း တို့ကား နိဌိမတံ။ တနေ့နေ့တွင် မိမိ နှင့် မိမိ သူငယ်ချင်းများ တစုံတရာ ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်နိုင်မည် ဟု စိတ်ကူးယဉ်တုန်း ဖြစ်၏။ ဤဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ တွင်လား၊ ဤကမ္ဘာ၏ အခြားအပ တွင်လားတော့ မပြောတတ်။ မောင်ခွန်းချို ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်း များ ထမြောက်ပါစေ သတည်း ။ ။
(ဆရာကြီး သိပ္ပံမောင်ဝ ၏ ရေးသားဟန်အတိုင်း အတုယူရေးသား ပါသည်။)